Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ရှမ်းမြောက် တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့် ဒေသခံများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
ရှမ်းမြောက် တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့် ဒေသခံများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
at 5/03/2014 06:09:00 PM
ရှမ်းမြောက် မုန်ဘော် နှင့် ၀မ်ဆိုင်း တွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့် ဒေသခံများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၄) နယ်မြေ မုန်ဘော် နှင့် ၀မ်ဆိုင်း ကျေးရွာပါတ်ဝန်းကျင် တွင် တိုက်ပွဲများ (၂)ရက် ဆက်တိုက် ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် မုန်ဘော် နှင့် ၀မ်ဆိုင်းကျေးရွာ အပါအ၀င် ပါတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာ(၁၀)ရွာ ထက်မနည်း မှ ရွာသူရွာသားများ ရာ နှင့်ချီပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်း သိရသည်။ မုန်ဘော်ကျေးရွာ ဘောလုံးကွင်းတွင် စစ်ဘေးရှောင်သူများ ပြည့်ကျပ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် ယခုအခါ မူဆယ် နှစ်ခြင်းအသင်းတော် မှ စီစဉ်မှုဖြင့် မူဆယ် ဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည် ။
Mung Baw Wing Seng mare grup yin hta myen hpyen ni, mana (2014 May2ya) shana tupmyawk moter laknak kaba hte hkrup mara gap bun rai nbung li langai hte mung wa gayin hkawm ai majaw ya yang Wing Seng makau grup yin na mare kahtawng (10) daram Mungbaw gat pa de hprawng yen nga ai hta shara n shang mat ai majaw Muse Hka lup hpung nawku jawng wang hte Bawng Ring Sun ndai shara langai ngai kaw htawt sit na matu hkyen nga ai lam buga masha ni kawn chye lu ai.
Mung Baw ginra de 2014 April 29 ya shani kawn majan bai byin wa ai lam chye lu ai.
( Ref: eedy )
By Jade land FB